Task « fopla » | NewsMada
Task « fopla »
Par Taratra sur 23/03/2018
Resaka « Task force » ilay raha… Paikady napetraky ny fitondrana io hiadiana amin’ny asan-jiolahy eto amin’ny tanàna. Tsy honohono rahateo ny firongatry ny tsy fandriampahalemana fa azo tsapain-tanana. Fanafihana an-tanàn-dehibe, ambanivohitra, hany ka manjaka koa ny fitsaram-bahoaka.
Tsy tsapan’ny vahoaka rahateo ny asan’ilay “task force” e! Tsy mahagaga raha be ny mpanala hoe “task fopla” ireo. Ekena fa ny manao zavatra tsy mora, hoy isika Malagasy, saingy toy ny mialokaloka foana ambadik’izay ny rehetra. Tsy misy ny fandrosoana sy fahavitan-javatra mahomby. Milaza ny mpitandro filaminana fa tsy mikely soroka amin’ny ady amin’ny asan-jiolahy. Ekena izany, saingy ny atao no hita. Maro loatra ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo ary efa mila ho isan’andro.
Mety manao ny asany ihany ny “task force” fa tsy ampy ny paikady mipetraka na ny fanohanan’ny fitondrana azy ireo. Toy ny “tetikasa” rehetra, voafetra ao anatin’ny andro vitsy ihany ny hetsika dia mijanona. Miverina avy eo ny asan-jiolahy. Ny jiolahy rahateo, efa tsy matahotra mpitandro filaminana. Firifiry ireto farany no maty an’ady?
Kely ny herijika, sa tsy ampy ny fitaovana sa tsy manana paikady maharitra ireo tompon’andraikitry ny filaminana?
Any amin’ny fitondrana aloha no mihandrona ny rihatra e! Rehefa mbola mandry andriran’antsy ny vahoaka, mitaintaina andro aman’alina, voatafika ny trano, voaroba ny omby, voatafika ny vazaha, maty ny havana… ny fitondrana mihitsy no “fopla”. Tsy misy ny paikady maharitra mipetraka. Ny sehoseho no betsaka ho an’ny sasany. Tsy mahatoky ny olona hany ka ny fitsaram-bahoaka sy ny fikomiana no anehoan’izy ireo ny alahelony. Ity resaka ity izay tsy voafehy intsony koa, satria tsy azon’ny olona na tsy raharahiany intsony ny maha fandikan-dalàna azy. Mety ny lalàna ihany koa ny “fopla”? Mba hiala izay resaka “fopla” izay, miandry vokatra ny rehetra. Mety hihena ve ny tsy fandriampahalemana? Inona ny paikady “tsy fopla” apetraky ny fitondrana amin’ny ady amin’izany, sa tena “fopla” daholo izay tonga eo ka nofinofy izany filaminana izany?